Dab Damis - Wikipedia
Dab damis Sapporo, Japan
Mashiinka dabka (oo sidoo kale lagu yaqaan meelo ka mid ah sida dab-damis ama qalabka dabka) waa gaari loogu talagalay hawlaha dab-demiska. Ereyada "mishiinka dabka" iyo "dab-damis" ayaa badanaa loo isticmaalaa isbeddel; si kastaba ha ahaatee qaybta dab-demiska / adeegyada dabka waxay tixraacayaan noocyada gaarka ah ee gaariga.
Ujeedooyinka ugu muhiimsan ee ka mid ah mishiinka dabka waxaa ka mid ah in dab-demiyeyaasha loo geeyo goob ay dhacdo, iyada oo la siinayo biyo la dagaallanka dabka, iyo qalab kale oo loo baahan yahay dab-demiyeyaasha. Waxa kale oo loo isticmaali karaa adeegyo kala duwan oo kale sida adeegyada caafimaadka degdegga ah iyo badbaadinta xaaladaha aan ka ahayn dabka. Gaariga casriga ah ee caadiga ah wuxuu u adeegsan doonaa qalab loogu talagalay hawlaha dab-demiska iyo hawlaha samatabbixinta, oo leh qalab caadi ah oo ay ku jiraan jaranjaro, tuubooyin, qalab neefsasho oo iskiis ah, qalab gaaban, qalabka gargaarka degdegga ah, iyo qalabyada badbaadinta hidaha.
Gawaarid badan oo badan ayaa ku salaysan moodooyinka caadiga ah (inkastoo qaybo ka mid ah la cusbooneysiin karo si ay ula qabsadaan baahida isticmaalka gawaarida). Waxay sida caadiga ah ku xiran yihiin digniino maqal iyo muuqaal ah, iyo sidoo kale qalabka isgaadhsiinta sida raadiyaha laba-dhinac iyo tiknoolajiyada kombiyuutarka mobile.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dab_Damis&oldid=192871"
Last edited on 19 Juun 2019, at 15:29